वृष राशि कति प्रतिशत स्वार्थी? भोलेनाथले सबैको कल्याण गरुन ! – Complete Nepali News Portal
ScotNepal September 28, 2020
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक राशिको आफ्नो–आफ्नै व्यवहार र स्वभाव हुन्छ । यसै आधारमा रहेर पनि राशि अनुसार स्वार्थीपन छुट्याउन सकिने ज्योतिषीहरु बताउँछन् । हरेक मनुष्यमा स्वार्थ, लोभ मानवमा हुनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन । तर जीवनमा अरु चीजलाई प्राथमिकतामा राख्दा आफ्नो प्रगति नहुने देखेपछि मानिसहरुमा स्वार्थीपन आउने गर्छ । त्यसो त, केहि व्यक्तिहरु भने आफूलाई भन्दा अरुलाई प्राथमिकतामा राख्न रुचाउँछन् ।
वृष राशि हुनेहरु आफ्नो लागि मात्र नभई अरुको लागि पनि सोच्छन् । यिनीहरु लगभग ४५ प्रतिशत स्वार्थी हुन्छन् । आफूलाई घाटामा राखेर पनि कहिले काहीं वृष राशि हुनेहरु अरुलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।